नमूना कालोपत्रे सडक एक महिनामै उप्कियो ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS नमूना कालोपत्रे सडक एक महिनामै उप्कियो !
नमूना कालोपत्रे सडक एक महिनामै उप्कियो !
बागलुङ । बागलुङको जैमिनी गरपालिका कुश्मीसेरा स्थित २० बर्ष अघि खुलेको बाटोमा एक महिना अघि मात्रै जम्मा २ किलोमिटर सडक नमूनाका रुपमा कालोपत्रे भयो । तर बिडम्बना कालोपत्रे भएको उक्त सडक एक महिनामै उप्किएको छ ।
१ करोड २५ लाखको लागतमा विएण्डए निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको सडक अहिले कालोपत्रे हातमा आउँछ । संघीय सांसद सूर्य पाठकको सांसद विकास कोषबाट १ करोड र जैमिनी नगरपालिकाको एक करोडमा निर्मााणाधीन सडक अहिले उनै सांसदले अनुगमन गर्दा हातमा आउने भएपछि निमार्ण कम्पनीको लापरवाही सतहमा आएको हो ।
अहिले सांसद, सडक डिभिजन कार्यालयको अनुगमन टोलीले गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन निकालेको छ । सांसद पाठकले निमार्ण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको देखिएकाले भुक्ताानी रोकिएको बताए ।
पिच गरिएको १६ मिटर मध्य २ सय ५८ मिटर गुणस्तरहीन भएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गरिएको थियो । ६ जना घाइतेहरुलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा ल्याइएको छ । अन्यको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । न्युज २४ बाट साभार